10 ဥရောပမှာတော့သာယာလှပကျေးရွာများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 10 ဥရောပမှာတော့သာယာလှပကျေးရွာများ
ကျယ်ပြန့်သောဥရောပနိုင်ငံများသည်ဒဏ္legာရီများနှင့်နတ်သမီးပုံပြင်များ၏မူလအစဖြစ်သည်, ရှေးဟောင်းလျှို့ဝှက်ချက်များကိုစောင့်ရှောက်သောရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရှုခင်းများနှင့်ကျေးရွာများ. အလယ်အလတ်နာမည်ကြီးမြို့ကြီးများနှင့်နီးစပ်သောသို့မဟုတ်ထုံးကျောက်တောင်များနောက်ကွယ်တွင်ပုန်းနေလိမ့်မည်, ဥရောပရှိပါ ၀ င်ပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောကျေးရွာများသည်အဆုံးမဲ့ဖြစ်သည်. သေး, ရှိပါတယ် 10 အခြားအလှကုန်များနှင့်မှော်အတတ်များသည်အခြားနေရာများကိုကျော်ဖြတ်နိုင်သည့်ဥရောပရှိသာယာလှပသောကျေးရွာများဖြစ်သည်.
ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးခရီးသွားမှအများဆုံးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. ဤဆောင်းပါးသည်ရထားခရီးသွားအကြောင်းကိုပညာပေးရေးသားခဲ့ခြင်းနှင့်ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားအားဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်, အဆိုပါ ကမ္ဘာပေါ်တွင်စျေးအသက်သာဆုံးရထားလက်မှတ် ၀ က်ဘ်ဆိုက်.
1. ကြည့်ပါ, ဆွစ်ဇာလန်
ဆွစ်ဇလန်အတွက်အလှဆုံးရွာ, ဂါဒါးသည်ရွာငယ်လေးတစ်ရွာဖြစ်သည်, အစိမ်းရောင်မြက်ခင်းကြားတွင်တည်ရှိသည်. Engadin ချိုင့်ဝှမ်း၏အောက်ပိုင်းရှိသည်, ဒါမှမဟုတ်ဒေသခံတွေကခေါ်သကဲ့သို့, Engiadina သည်ဆွစ်ဇာလန်၏အမြင်ကိုထိန်းချုပ်သည်. ဒါဟာနေရောင်ခြည်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားသည်, 300 ချိုင့်အထက်မီတာ, လာမယ့်အရာအားလုံးကိုစောင့်ရှောက်, ဆောင်းရာသီကိုလိုက်ဖမ်းခြင်းကဲ့သို့ရှေးဟောင်းအစဉ်အလာများလည်းရှိသည်.
အိမ်ဖြူတော်များသည်ရိုးရာပန်းချီကားများနှင့်အလှဆင်ထားသည် sgraffiti ဟုခေါ်တွင်ရှေးဟောင်းကျောက်စာ. ရောမ, ဒေသခံဘာသာစကား, ကြောင်းအသက်ရှင်ကျန်ရစ်နှင့်နေဆဲယနေ့ပြောပြီဖြစ်ပါတယ်.
ရထားအားဖြင့် Chur မှဘေဆယ်
ရထားအားဖြင့် Chur မှ Bern
ရထားဖြင့် Tirano သို့တူရင်
ရထားအားဖြင့် Tirano မှ Bergamo
2. ဥရောပမှာတော့သာယာလှပကျေးရွာများ: Cochem, ဂျာမနီ
Moselle မြစ်ကမ်းနားမှာရှိတဲ့ရွာ. ကျဉ်းမြောင်းသောလမ်းများတစ်လျှောက်တွင်သစ်သားအိမ်များနှင့်သာယာလှပသည့်အိမ်များ. ကျဆုံးခြင်းမှာလှတယ်, စိမ်းလန်းသောမြက်ခင်းများနှင့်သစ်ပင်များသည်သူတို့၏ရွှေအဝတ်အစားများကိုဝတ်ဆင်ကြသည်, လှပသော Cochem ၏ဆွဲဆောင်မှုနှင့်သာယာလှပသော setting ကိုထည့်သွင်း.
စပျစ်ဥယျာဉ်များနှင့်တောင်ကုန်းများကဝိုင်းရံ, ကိုခမ်းကျေးရွာသည်ပို့စကတ် - ပြီးပြည့်စုံသောလူဖြစ်သည်. ရွာကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်နှင့်သာယာလှပသည့်ရှုခင်းများကိုမြင်နိုင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းမှာစက်ဘီးဖြင့်ဖြစ်သည်.
ရထားအားဖြင့် Cochem မှ Frankfurt
ရထားအားဖြင့် Cochem မှ Bonn
ရထားအားဖြင့် Cochem မှ Cologne
ရထားအားဖြင့် Cochem မှ Stuttgart
3. Dinant, ဘယ်လ်ဂျီယံ
မတ်စောက်သောကမ်းပါးများအကြား, Meuse မြစ်ကမ်းနားပေါ်မှာ, Wallonia ဒေသရှိလှပသော Dinant ကျေးရွာတွင်ရှိသည်. မြူဆိုင်းသောရာသီဥတု, ဆောငျးရာသီ, သို့မဟုတ်နွေဦး, ဒီရွာငယ်လေးဟာဘယ်ရာသီဥတု၊ ဘယ်အချိန်မှာမဆိုအံ့သြစရာကောင်းတယ်. ခမ်းနားလှပသည့်ရှုခင်းများသည်ချောက်ကမ်းပါးနေရာမှ ပို၍ ပင်ချစ်စရာကောင်းသည်.
Collegiale Notre-Dame De Dinant ၏အမိုးခုံးသည်အနက်ရောင်ထုံးကျောက်တောင်များနောက်ခံတွင်ထင်ရှားသောလက္ခဏာဖြစ်သည်။. ရှေ့အရောင်အိမ်များနှင့်လှေ, အဆိုပါအံ့မခန်းအမြင်များဖြည့်စွက်.
မင်းမှာအချိန်ပိုရှိရင်, အနီးအနားရှိ Crevecoeur ရဲတိုက်သို့သွားပါ, Annevoie ၏ဥယျာဉ်တော်, ပိုစတာနှင့်တူသောအမြင်များအတွက် Chateau de Veves နှင့်.
ရထားအားဖြင့် Dinant မှဘရပ်ဆဲလ်
ရထားအားဖြင့် Dinant မှ Antwerp
ရထားဖြင့် Dinant မှ Ghent
ရထားဖြင့် Dinant မှ Liege
4. ဥရောပမှာတော့သာယာလှပကျေးရွာများ: Norcia, အီတလီ
ခုခံကာကွယ်နံရံများနောက်ကွယ်မှ, စိမ်းလန်းသောတောင်ကုန်းများကြားတွင်, အရှေ့ Umbria ၌တည်၏, သင်သာယာလှပသော Norcia ရွာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်. ဒီအလယ်ခေတ်ကရွာငယ်လေးဟာသာယာလှပပြီးပတ် ၀ န်းကျင်အရောင်တောက်တောက်နဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့နွေ ဦး ရာသီမှာလုံးဝရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းလှပါတယ်.
အသင်းတော်များ, အီတလီနန်းတော်, Norcia ၏ enchanting အမြင်များကိုထည့်ပါ. လည်း, နာရာမြစ်သည်စူးစမ်းလေ့လာရန်နှင့်ရှာဖွေရန်နောက်ထပ်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာအမြင်များကိုခံစားကြည့်ပါ အီတလီမှာရှိတဲ့လှပတဲ့ Umbria ဒေသ၏. လမ်းပေါ်တွင်ကျော်ကြားလှသောတံငါသည်များကိုကြည့်ရှုရန်သေချာစေပါ, နှင့် spaghetti သို့မဟုတ် frittata ၏ဒေသဆိုင်ရာအစားအစာကိုထရပ်ကားများဖြင့်မြည်းစမ်းပါ. ဒါဟာရိုးရှင်းစွာဘုရားသခင့!
5. ချောမွေ့, နယ်သာလန်
သင်မော်ကွန်း tulip လယ်ကွင်းဖမ်းယူဖို့ဟော်လန်သို့ခရီးသွားလာလျှင်, ထို့နောက်သာယာလှပ Lisse သို့သွားရောက်. လှပတဲ့ရွာလေးပါ 45 မိနစ်များ အမ်စတာဒမ်မှဝေး.
လစ္စသည်နယ်သာလန်ရှိအသေးငယ်ဆုံးကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်အိမ်ကဖြစ်ပါတယ်7Keukenhof ဥယျာဉ်တွင်နှစ်စဉ်စိုက်သောမီးသီးပေါင်းသန်းပေါင်းများစွာ. မတ်လကုန်မှမေလလယ်အထိ, ဤမီးသီးများသည်လှပပြီးရောင်စုံ tulips များထဲသို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိသည်. ထို့ကြောင့်, Liss သည်နွေ ဦး ရာသီ၌အချစ်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးမမေ့နိုင်သောရိုက်ချက်များနှင့်မြင်ကွင်းအချို့အတွက်သင်ရောက်ရှိနေသည်.
6. ဥရောပမှာတော့သာယာလှပကျေးရွာများ: စိန့်. Gilgen, သြစတြီးယား
လူတိုင်းမှော် Hallstatt ကိုသိတယ်, ဒါပေမယ့်သြစတြီးယားအများအပြားချစ်စရာကောင်းတဲ့ကျေးရွာများနှင့်မြို့များမှနေရာဖြစ်သည်. ဥရောပရှိအထင်ရှားဆုံးကျေးရွာတစ်ရွာသည်သြစတြီးယားတွင်တည်ရှိသည်. စိန့်. တစ်ချိန်ကဂျင်ဂျင်ကျေးရွာသည်မိုဇတ်မိသားစု၏အိမ်ဖြစ်သည်, ရွာသည် Wolfgang ရေကန်တွင်ထိုင်သည်.
သင်ရွာကိုခြေကျင်ဖြင့်စူးစမ်းလေ့လာနိူင်သည် စက်ဘီး, ဒါမှမဟုတ်ကေဘယ်လ်ကြိုးတစ်ခုကနေ. သင်အမြင့်ကိုကွောကျရှံ့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုရငျ, ထို့နောက်ကေဘယ်လ်ကားမှဖွင့်လိုက်သောမြင်ကွင်းများသည်သင်၏အသက်ရှူမှုကိုပျောက်ကွယ်သွားစေမည်. ရွာ၏သာယာလှပသည့်ရှုမြင်ချက်များသည်ဗီယင်နီးယန်းအနုပညာရှင်များ၏လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်.
ရထားအားဖြင့် Salzburg မှမြူးနစ်
ရထားဖြင့် Salzburg သို့ဗီယင်နာ
ရထားအားဖြင့် Salzburg မှ Graz
ရထားအားဖြင့် Salzburg မှ Linz
7. စိန့်. ပါရမီရှင်, ပြင်သစ်
ပြင်သစ်အစားအစာများ Foie Gras နှင့် truffles ၏မူလနေရာဖြစ်သည်, စိန့်၏သေးငယ်တဲ့ရွာ. ပါရမီသည်2ဘော်ဒိုးမှနာရီ. ဤသည်န်းကျင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့စပျစ်ဥယျာဉ်အာမခံပါသည်, သင်သာယာလှပသည့်ကျေးလက်နှင့်ကျေးလက်ဒေသကိုလေးစားကြည်ညိုသောအားဖြင့်ကောင်းသောစပျစ်ရည်တစ်ခွက်ကိုစားနိုင်သည်.
စိန့်. Genies ရွာကငါတို့အင်္ဂါရပ်များ 10 မတ်စောက်သောအိမ်ခေါင်မိုးများကြောင့်ဥရောပရှိသာယာလှပသောကျေးရွာများဖြစ်သည်. ဖြည့်စွက်ကာ, the 12th-century church and 13th-century castle are right in the center of the village. အကွေ့အကောက်များသောလမ်းသည်ရွာနှင့်၎င်း၏အနက်ရောင်ရှိသောကျောက်တုံးများကိုဖြတ်ပြီးအထင်ကြီးစရာကောင်းသောရှုထောင့်များနှင့်နေရာများသို့သွားလိမ့်မည်.
စိန့်. ပြင်သစ်နှင့်အတူကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိသောနတ်သမီးပုံပြင်ကို Genies ကသရုပ်ဖော်သည်. မင်းကြည့်ရတာပျော်စရာကောင်းတယ် ရထားခရီးစဉ် ပြင်သစ်တစ်လွှား.
ရထားဖြင့် Bordeaux သို့ Nantes
8. ဥရောပမှာတော့သာယာလှပကျေးရွာများ: စာပေ, အင်္ဂလန်နိုင်ငံ
Bibury သည်ဥရောပရှိအလှပဆုံးကျေးရွာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။. Arlington Row လမ်းလျှောက်ဖို့သေချာပါစေ, အများဆုံးချစ်စရာကောင်းလမ်းသွားနှင့်လှပသော SNAP.
လမ်းလျှောက်မှုကသင့်အား ၁၇ ရာစု Bibury ရှိအသက်တာသို့ပြန်သွားပါလိမ့်မည်. အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏အလှဆုံးကျေးရွာသည် River Coln ကမ်းခြေတွင်ရှိသည်. တစ်ချိန်ကဤသည်ရက်ကန်းသားအိမ်များမှသိုးမွှေးချိတ်ဆွဲရန်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ခဲ့သည်. Bibury နယ်မြေများသည်ပြီးပြည့်စုံသောနယ်မြေတစ်ခုဖြစ်သည် နေ့လည်ခင်းပျော်ပွဲစား သို့မဟုတ်နံနက်စောစောလှည့်လည်ခရီးသွား of ည့်သည်များ၏အေးဆေးတည်ငြိမ်သောအိပ်မက်လှုပ်မှုများကိုမရပ်တန့်ခင်လမ်းလျှောက်ပါ.
9. ဂျာမနီမှာ Lindau
Lindau ကျေးရွာသည်သြစတြီးယားနိုင်ငံနှင့်ဂျာမနီနိုင်ငံနယ်စပ်တွင်တည်ရှိသည်, Bavarian ဂျာမနီမှာ. ၎င်းသည်တစ် ဦး အတွက်အလှပဆုံးဒေသတစ်ခုဖြစ်သည် ဥရောပမှာအားလပ်ရက်လဲ. Constance ရေကန်၏ကမ်းခြေတွင်, ထို့အပြင် Bodensee အဖြစ်လူသိများ, ဒီရွာကတကယ်တော့ကျွန်းဆွယ်ဖြစ်တယ်, ပြည်မနှင့်ကျွန်းအကြားဆက်သွယ်ထားသောတံတားတစ်စင်းဖြစ်သည်.
ရွာရှိသာယာလှပသည့်ရှုခင်းများသည် Maximilianstrasse လမ်းဖြစ်သည်, ၁၃ ရာစုမီးပြတိုက်ဟောင်း, နှင့်သင်တန်းဟောငျးမြို့, Altstadt.
လင်ဒါ လျှို့ဝှက်ကျောက်မျက် နောက်လာမည့်ခရီးစဉ်တွင်ဂျာမနီနှင့်ကျေးရွာတစ်ရွာသို့သွားရန်. မြူးနစ်ကနေ Eurocity ရထားရှိပါတယ်, ဇူးရစ်, နှင့်စတူးဝပ်.
ရထားအားဖြင့် Lindau မှဘာလင်
ရထားအားဖြင့် Lindau မှမြူးနစ်
ရထားဖြင့် Lindau သို့ Stuttgart
ရထားအားဖြင့် Lindau မှဇူးရစ်
10. ဥရောပမှာတော့သာယာလှပကျေးရွာများ: ချက် Krumlov, ချက်သမ္မတနိုင်ငံ
ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့အမွေကို ခံရ. site ကို, Bohemia ရှိ Cesky Krumlov ရွာသည် Renaissance ရောနှောခြင်းဖြစ်သည်, Gothic, နှင့် Baroque ဗိသုကာ. အဆိုပါ Vltava မြစ်အားဖြင့်လမ်းဆုံ, Cesky Krumlov သည်ဥရောပရှိအလှဆုံးမြစ်တစ်မြစ်ဖြစ်သည်. ကမ်းခြေရှိလှပသောသဘာ ၀၀ န်းကျင်ရှိသည့်ကမ်းခြေရှိအိမ်များ၏ပုံသဏ္Europeာန်သည်ဥရောပရှိအမြင့်ဆုံးသောမြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်သည်. ဒါက Cesky Krumlov ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ်မှာသောအကြောင်းပြချက်ပါပဲ 10 ဥရောပစာရင်းအတွက်သာယာလှပကျေးရွာများ.
Cesky Krumlov ရဲ့မမေ့နိုင်စရာမြင်ကွင်းတစ်ခုအတွက် Cesky Krumlov ရဲတိုက်ကိုတက်ဖို့အကြံပေးလိုပါတယ်, Vltava မြစ်, နှင့် Bohemia ဒေသတဝိုက်ခမ်းနားသဘောသဘာဝ.
ဥရောပရှိအလှပဆုံးကျေးရွာအချို့သည်တောင်တန်းများရှိခရီးသွား mass ည့်သည်များနှင့်ဝေးကွာလျက်ရှိသည်. ဤလျှို့ဝှက်ကျောက်မျက်များသည်လက်လှမ်းမမီနိုင်သောအရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်ဒီနေ့ရဲ့နည်းပညာနှင့်အတူ, သူတို့ကယခင်ကထက်ပိုမိုနီးကပ်စွာဖြစ်ကြသည်. ရွာတိုင်းကိုသင်လုပ်နိုင်သည် အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ဥရောပတစ်လွှားရထားခရီးစဉ်အပေါ်. နာရီအနည်းငယ်အကြာမှာမင်းလှည့်လည်သွားလာနိုင်တယ်, ဤလျှို့ဝှက်ယဉ်ကျေးမှုများနှင့်အမြင်များ၏ရုပ်ပုံများကိုနှစ်သက်ခြင်းနှင့်ရိုက်ယူခြင်း.
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, ဥရောပရှိဤသာယာလှပသည့်ကျေးရွာများသို့သင်အသက်သာဆုံးရထားလက်မှတ်များကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည်.
သင် ... လုပ်ပါသလား ကျွန်ုပ်တို့၏ blog post "10 မြှုပ်နှံချင်တယ် ဥရောပမှာတော့သာယာလှပကျေးရွာများသင်၏ site ပေါ်သို့? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url =https://www.saveatrain.com/blog/scenic-villages-europe/ ‎– (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
beautifuldestinations beautifulvillageseaurope Fairytaletowns scenicvillageseurope ကျေးရွာပေါင်း